China i-B008 yelanga yegadi ukukhanya_9.7V i-lithium ibhetri abavelisi kunye nabathengisi | Hangchi
1. Impahla eluhlaza - inqanaba eliphezulu lesinyithi kunye nepeyinti yokutshiza. Qinisekisa ukuba isibane asizukufumana umhlwa kwaye sikwenze ukuba sikhangeleke ngakumbi.
2. Ubungqongqo beeds, kukuqaqamba okungaphezulu.
3. Ixesha elide lokusebenza -10-12 iiyure.
4. Lifpo4 ibhetri -ukukhutshwa ngokunzulu kunye neminye imijikelezo.
Izibane zethu zengca yelanga zisetyenziswa kumacandelo amaninzi, zomelele kwaye zodidi. Xa kuthelekiswa nezinye iimveliso kwintengiso - sineetshipsi ezininzi ezikhokelwayo, sinebhetri enkulu. Iphaneli yelanga ikwaluhlobo lwe-9V ehamba phambili kolu hlobo lokukhanya.
I-AntarCS Solar Bollard Aluminium umgubo ogqunywe kwisiphelo se-satin esingwevu
• Ukukhanya kwelanga ngokorhwebo
• Ifuna iiyure eziyi-10-12 ngaphambi kokuyisebenzisa
• Ukukhanya kweeyure ezili-10-12 ngobusuku bonke
• Umgangatho ophezulu webhetri ye-LiFePO ekwi-inbuilt
• Uyilo lwangoku olunomtsalane
• Ilungele iindlela ezikhanyayo neendlela zokuhamba
• Isivamisi sokukhanya esizenzekelayo sivula ii-LED zivule kwaye zicime ukwenzela ukutshona kwelanga
• Iwaranti: unyaka omnye iwaranti yokusebenza gwenxa okanye ukusilela kwecandelo okungaphenjelelwa ziindlela zangaphandle
Iinkcukacha Pole S0LP0LE010, Wall S0LWALL010, Insika S0LPILL010, Bollard S0LB010
• Faka umbala I-Powdercoat satin emnyama • Iphaneli yelanga 9V 6watts
Ixesha lokuhlawula Iiyure ezi-4-6 Ubungakanani bePhaneli yelanga Ubungakanani: 230Hx230Wmm
.CCT 4000K (mhlophe opholileyo) Source Umthombo wokuKhanya Ii-LED ezingama-36 eziphakamileyo
Ubungakanani beBollard 800H x 275Wmm (phezulu) ・ Ibhetri LiFePO ^ ibhetri
Ukuqaqamba Imilinganiselo. Imveliso ye-lumen engama-350 • Imathiriyeli IAluminiyam, ipolycarbonate diffuser
Yintoni iLumen? Ngamagama alula, iiLumens ngumlinganiso wenani elipheleleyo lokukhanya okubonakalayo okuvela kwisibane okanye kumthombo wokukhanya. Ukuphakama kwenqanaba le-lumen, kuya kubakho isibane 〃b 「ighte「 〃. Ngaba oku kuthelekiswa njani neminye imithombo yokukhanya? Imizekelo eliqhelekileyo Izikhanyiso ezingama-70
Umgaqo osebenzayo wokukhanya kwegadi yelanga kukuba ipaneli yelanga ifunxa amandla elanga (amandla alula) emini kwaye iguqula amandla okukhanya abe ngamandla ombane kwaye iwugcine kwibhetri egcwalisekayo. Xa umbala wosuku umnyama, ukukhanya kwelanga kuyavula kwaye kuqale ukukhanyisa, kwaye umbala wosuku uqala ukutshintsha kusasa, ukukhanya ngokuzenzekelayo kuyacima, kwaye ukutshaja kuyaqala. Inokusetyenziswa kwimeko yesicelo esifana negadi yaseyadini, amabala abukekayo, kunye neendawo zokuhlala abantu.
Amandla aluhlaza, akukho kungcoliseka;
Akukho sidingo sokutsala ucingo, lukhuselekile kwaye luthembekile, kulula ukuhamba kwaye kulula ukubeka;
Ukusebenza ixesha elide kunye neendleko eziphantsi;
Amandla elanga angasetyenziselwa iminyaka emi-5 ukuya kweli-10, ii-diode ezikhanyisa ukukhanya kwe-LED zisebenza ixesha elide;
Ukuyilwa kwesekethe ngokufanelekileyo, ukonga umbane kunye nokugcina imali;
Ubomi bemveliso ekude.
Ukongeza, ibhetri ye-lithium ibhetri elungelelanisiweyo elisebenza ngayo inokuphucula kakhulu ingqokelela yokukhanya; Kulula ukufaka ngokuthe ngqo phantsi kwepaneli yelanga, ngobukhulu obuncinci kunye nobunzima bokukhanya, ukunciphisa iindleko zokwakha; ubomi inkonzo ende, nto leyo yokugcina amandla ibhetri lead-acid yemveli amaxesha 3-5; ichaphazeleka kancinci kubushushu, ngakumbi ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nobuphantsi; ngaphandle, ulondolozo-free yokusebenza kulungile.
Uyilo lweSolar Lighting
Egqithileyo 2713 uthotho ukukhanya ingca yelanga egadini
Okulandelayo: I-G001 ukukhanya kwelanga ukukhanya kwewaranti iminyaka emi-5
I-SWL-16 (MARS 3) ukukhanya kwelanga eludongeni lokutsha kwakhona ngu ...
I-PNG 144P 9BB ukusebenza kakuhle kweseli yepaneli yeseli b ...
I-PV1800 Pro series-450v / 240v / 110v icime igridi yelanga ...